> Resource > Ladnaansho > Toshiba Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Toshiba
Ma suurto gal in ay dib u soo ceshano Xogta laga Laptop Toshiba?
Editor Qaaliga ah, anna waxaan leeyahay a Toshiba Satellite C805. Waan jeclahay oo aad u badan, laakiin musiibadii shalay dhacay. Waxaan isku dayay inuu formatting ah flash drive USB, laakiinse anigu uma aan sameeyey sababta aan formatted E ah: Risaalo \_. Waxaan sidaa hadda ha yidhaahdeen, sababtoo ah dhammaan photos, filimada iyo faylasha kale badbaadiyey on xijaab in tageen! Run ahaantii waxaan u baahan tahay caawimaad si aad u hesho dib. Ma jirtaa fikrad kasta oo wanaagsan?
Ma jirto baahi in ay si murugo leh oo dhan. Waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego aqoonsiga aasaasiga ah ee arrinta khasaaro xogta, oo intaas oo files lumay waa geli karin on your laptop Toshiba drive adag ka hor inta files cusub iyaga overwrite. Taasi waxay suurtagal ah inuu ka soo kabsado xogta ka laptop Toshiba inta aad si deg deg ah ku filan u dhaqmaan.
Wondershare Data Recovery noqon doonto marka laguu adeeg haddii xogta laga badiyay ka Toshiba laptop sababtoo ah formatting, tirtirka, Baadi nidaamka, shil gaari ku adag, jeermiska fayraska, waxa uu barnaamijkaaga u la yaab leh loogu talagalay soo kabashada xogta awood u sanaanayaa photos, videos, files audio, waraaqaha, emails iyo noocyo badan oo file kale ka wadid aad Toshiba laptop ee adag. Sidaa daraadeed, waxaad ma soo kaban karto oo kaliya xogta ka laptop Toshiba, laakiin sidoo kale Toshiba adag dibadda drive, USB flash drive, kaadhka xusuusta, iwm
Si aad u billowdo dib u soo kabashada xogta Toshiba, fadlan kala soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran. Version maxkamad wuxuu kuu ogol yahay in iskaan wadid aad Toshiba laptop ee adag intaadan gadan nooca buuxda.
Qabtaan Toshiba Laptop Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Haddii aad laptop Toshiba mar dambe reboot karaa, waxaad u baahan tahay in ay isku dayaan in ay isku xira drive adag la computer kale si loo farsameeyo soo kabashada.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay bilow
Bilow Wondershare Data Ladnaansho aad laptop Toshiba, waxaa lagu siin doonaa la hababka soo kabashada soo socda: "lumay Recovery File", "Recovery ah Barzakh," iyo "Recovery File ceeriin ah".
Si aad u soo ceshano laga badiyay, tirtiray ama formatted files ka laptop Toshiba, ha isku dayno "lumay Recovery File" mode marka hore.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka arki kartaa tilmaamaha uu furmo suuqa si taxadar leh oo dooro habka ugu haboon ee dib u soo kabashada. Iyo fadlan ha soo dajiyo qalab aad Toshiba ee xijaab meesha faylasha ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Sawirka Barzakh Your Toshiba Laptop ee
In talaabo tan kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan warqad drive ee Risaalo oo guji "Start" si ay u bilaabaan iskaanka xogta laga badiyay.
Si aad u soo kabsado xogta ka drive ah Toshiba laptop formatted ee adag, waxaad u baahan tahay in ay doortaan "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 ka Laptop Toshiba Ladnaansho Data Xulo
Natiijada iskaanka ayaa lagu soo bandhigi doonaa dhabbayaal ama qaybaha uu furmo. Waxaad ka arki kartaa magaca file in lagu hubiyo sida badan files waxaad awoodi doontaa inaad si ay u soo kabsadaan.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan kuwa faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin aad laptop Toshiba badbaadiyo.